Jiraattonni Godina Gujii Lixaa qaamolee nageenyaa mootummaa komatan - BBC News Afaan Oromoo
Jiraattonni Godina Gujii Lixaa qaamolee nageenyaa mootummaa komatan
Jiraattonni godina Gujii Lixaa dubbifne sababa dhibdee nageenyaa godinicha keessa jiruun rakkina adda addaaf saaxilamaa jiraachuu dubbatu.
Jiraattonni Aanaalee Qarcaa fi Malkaa Sooddaa irraa BBC'tti dubbatan qaamoleen nageenyaa mootummaa nagaa eeguuf ramadaman nageenya booressaa jiru jedhu.
Hidhattoota bosona jiran deeggartu jedhamanii qaamolee nageenyaa mootummaan miidhaan irra gahaa akka jiru himatu.
Faallaa kanaatiin hojjettoonni mootummaa fi kanneen mootummaan hidhata qabu jedhamanii shakkaman hidhattoota Waraana Bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin butamaa fi ajjeefamaa jiraachuu kan himtanis jiru.
Kana gidduutti nagaan bahanii galuu fi hojjetanii jireenya nagaa jiraachun nutti ulfaate jedhu jiraattonni dubbifne.
Gujii Lixaatti hidhattoonni 110 ol 'ummatatti deebi'an'
'Obboleessa koo jaarsa ganna 65 mana keessatti ajjeesan''
Jiraataa aanaa Malkaa Sooddaa kan ta'an Obbo Roobalee Boontoo, ''bakka ani hin jirretti humni ittisa biyyaa milishaa gandaa waliin ta'uun saawwan koo sagal ooffatanii deeman,'' jedhan.
''Waraana Bilisummaa Oromoo duraanii bosonatti hafan nyaachista, mana kee keessa bulchita jechuun kana rawwatani. Ani hojjetadhee buluu malee waan isaan jedhan keessa hin qabu,'' jedhu.
Godinicha keessatti sababa rakkoo nagenyaa jiruun iddoo tokko tokkotti doqdoqqeen tajaajila akka hin kennine dhorkameera.
Sababa kanaan galiin dargaggoota hedduu hubamuufi hojjetanii buluun rakkisaa ta'uu jiraataan Aanaa Qarcaa kan ta'an Obbo Boruu galgaloo bilbilaan BBC'tti himaniiru.
"Bakka itti iyyannus dhabnee rakkoo keessa jirra" kan jedhu Boruun, "yoo gaaffii gaafanne mirga maalii qabdu komaandi postii jala jirtu'' jechuun aanga'oonni isaanitti dhiyeenya jiran akka deebisaniif dubbata.
Bulchaan Godina Gujii Lixaa Abarraa Bunnoo qaamoleen nageenyaa mootummaa osoo hin taane rakkoo uumaa kan jiru hidhattoota ta'uu dubbatu.
Raayyaan Ittisa Biyyaa baay'inaan socho'aa hin jiru jedhan.
''Milishaan ganda gandatti nagaa ni eega, humni addaa fi kora bittinneessaan Oromiyaa uummata wajjin tahuun baadiyyaa keessattis nagaafi tasgabbiin akka uumamu hojii guddaa hojjetaa jiru,'' jedhan.
Qaamoleen nageenyaa kunneen olaantummaa seeraa kabachiisuurra jiru malee uummata miidhaa hin jirani jedhu Obbo Abarraan.
''Dhokattee bakka bakkatti kan jirtu 'Shanee, shiftaa' dha. Qaama isaan hogganu hin qaban. Uummata saamaa, ajjeesaafi burjaajessaa jiru. Torban lama dura gara loon 21 ajjeesan'' jechuun isaanillee nageenya uummataa boora'aa jiruuf qaama komatan ibsan.
"Uummati adamoo godhee bakka dhokatanii guuraa jira"
Qaamni mootummaa saamicha jedhame raawwate akka hin jirre kan himan Obbo Abarraan warri qaamolee mootummaa komatan warra hidhattoota kana deeggaranidha jedhu.
''Uummata keessa kan Shanee rakkoo uumu deeggaru jiraachuu danda'a, warri akkanaa komii kaasuu danda'u, kun murtoo uummataati,'' jedhan.
''Namootni hidhaman ni jiru, namooti saamicha keessatti hirmaatan, nama ajjeesan ni hidhamu warri ragaan irratti hin argamne immoo ni hiikamu,'' jedhaniiru.
ABO: Ajaajaa waraanaa Eliyaas Gaambellaa jedhamu hin beeknu
16 Amajjii 2019
Hidhattoota WBO Godinoota Gujii Fi Gujii Lixaa: "Uummati adamoo godhee bakka dhokatanii guuraa jira"